Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ebe 4 n'ime 5 kacha mma n'akụkụ osimiri dị na US
Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • omenala • Entertainment • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ebe 4 n'ime 5 kacha mma n'akụkụ osimiri dị na US.
Ọmụmụ ihe ahụ lere anya na 100 osimiri gburugburu ụwa wee depụta ha n'ihe ndị dị ka ihu igwe, ọnọdụ okpomọkụ nke oké osimiri, ọnụ ahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ọnụ ahịa mgbasa ozi nke osimiri iji chọpụta osimiri bụ ebe ezumike kacha mma.
Ya na ọmarịcha osimiri n'onwe ya, ileghachi anya azụ site na Copacabana na-enye gị echiche nke otu n'ime obodo ndị kacha mara amara n'ụwa n'okpuru anya nke ihe oyiyi Kraịst Onye mgbapụta.
Ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya dị nso n'ụsọ osimiri bụ 11,153, nke kachasị n'akụkụ osimiri ọ bụla na ndepụta ahụ.
Osimiri anọ nke US mejupụtara akụkụ osimiri 5 kachasị elu, yana Miami Beach na-enye ọkwa osimiri kacha mma maka ezumike na US na ebe nke abụọ n'ozuzu ya.
Ebe ụsọ mmiri na-eme ụfọdụ ebe ezumike kachasị ewu ewu n'etiti ndị njem nlegharị anya US, ndị ọkachamara njem ekpughere ebe ezumike osimiri kacha mma n'ụwa.
Ma ọ tụgharịrị na ndị America agaghị aga ebe dị anya maka nnukwu njem n'ụsọ osimiri, dịka osimiri anọ US nọ n'ọkwa ise kachasị elu.
Oke osimiri 10 kacha mma maka ezumike gburugburu ụwa
n'usoro Aha osimiri Hashtags nke Instagram Ọnụọgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ/ụlọ mmanya Ọnụ ego ụlọ oriri na ọṅụṅụ ($) Nkezi okpomọkụ (Farenheight) Nkezi mmiri ozuzo kwa afọ (mm) Nkezi okpomoku oke osimiri (Farenheight) Ọnụ ọgụgụ
4 Ọdọ mmiri, Miami 8,200,000 809 $ 226.05 75.9 1,113 80.6 6.16
Osimiri Copacabana na Brazil aha ya bụ osimiri kacha mma maka ezumike na nyocha. Ya na ọmarịcha osimiri n'onwe ya, ileghachi anya azụ site na Copacabana na-enye gị echiche nke otu n'ime obodo ndị kacha mara amara n'ụwa n'okpuru anya nke ihe oyiyi Kraịst Onye mgbapụta. Ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya dị nso n'ụsọ osimiri bụ 11,153, nke kachasị n'akụkụ osimiri ọ bụla na ndepụta ahụ. N'elu nke a, Copacabana nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, okpomọkụ ikuku, na okpomọkụ mmiri.
Anọ US osimiri na-eme ka ndị fọdụrụ n'elu 5 osimiri, na Miami Beach ogo osimiri kacha mma maka ezumike na US na ebe nke abụọ n'ozuzu. Osimiri a bụ n'ezie otu maka ndị na-eme ihe na ndị ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ebe ọ na-enwetala hashtags nde 14.4 na Instagram. Nke a pụtara na ọ bụ ya kacha Instagrammed osimiri, nwere ihe karịrị nde 13.7 hashtags karịa nkezi osimiri. Beachsọ osimiri Miami ọzọ nọ n'ọnọdụ nke anọ, South Beach, bụ nke nwere oke ekele maka oke ikuku ikuku nke 75.9 ℉, ọ na-adịkwa ọkụ karịa n'oké osimiri yana oke mmiri nke 80.6℉.
Venice Beach họọrọ ebe nke atọ n'ozuzu ya, yana ọnụ ọgụgụ ụlọ nri nke abụọ kachasị elu (10,578), yana nke anọ kachasị Instagram hashtag (nde 4.2). Dị ka ọ dịkwa na mpaghara Los Angeles, Santa Monica Beach nwere ọnụ ọgụgụ yiri nke ahụ na Venice Beach, naanị ihe kpatara o ji dị ala (na ebe 5) bụ n'ihi 3.76 nde hashtags Instagram dị ole na ole.